Shiinaha Beanie & Soosaarayaasha Knits | Wenchang
Nooca Koofiyadaha Jiilaalka: Beanie
Feature Fabirc: Wadaag
Wakhtiga la bixinayo: 10-25 maalmood oo shaqo
Naqshad: Naqshad qaabaysan
Nooca ganacsiga: Soo-saar
Waqti Sample: 3-5days qaabka caadiga ah
Waxyaabaha: 100% Acrylic
Cabbirka: 58cm ama cabbirka loo qaabeeyey
Adeeg: OEM / ODM / Naqshadeynta
Dadku waxay ku mashquulsan yihiin inay jaakadyadooda ku daraan jaakado qaro weyn. Hadda, qalabka diiran maaha in la dayaco.
Sida koofiyadaha dhogorta, jiilaal kasta dadka waxay iibsadaan Beanie, maxaa yeelay madaxa aad buu muhiim ugu yahay inuu diirimaad yeesho. Iyo moodada koofiyada Beanie hat iyo shahaado wax ku ool ah ayaa aad u sarreeya.
Gabadha yar yar ee xayawaanka ah, oo gashan koofiyad aad u sareysa, qofka oo dhan wuxuu u muuqdaa mid aad u dheer, ruuxa sidoo kale aad buu kor ugu kacay.
Xiro jaakad midabkeedu daran yahay oo caadi ah xilliyada caadiga ah, u dhig dhig warqad dhogor Koofiyad ah, u fiirso inaad leedahay dad badan oo firfircoon, uma muuqato mid aad u rogrogmi kara. Dareen qaadashada ayaa xoogaa qaan gaar ah, xidho daboolka dhogorta MAO Qiu, waxay u muuqdaan kuwo qurux badan, yareeya saameynta da'da si loogu daro boqolkiiba.
Iyo gabdho aad u tiro badan oo maalmahan timahooda dheehanaya, xidhashada koofiyad Knit ah ayaa kaa caawin karta inaad ka gudubto xilliga foosha xun ee timaha madow ka baxayaan ka hor intaan la rinjiyeyn. Si qarsoodi ah u dhah, ma helin waqti aad ku maydho timaha gabadha dibadda, xirashada koofiyad Knit ah ayaa waliba dabooli kara iin.
Marka la soo koobo, jiilaalka waa inuu lahaadaa wax yar oo maqaarka maqaarkiisa ah, wuxuu diirin karaa diirimaad, tusmada moodada sare ee dhogorta dhogorta leh ee jirka agtiisa ah.
SHANGHAI ALLSOURCING waa shirkad hormuud u ah waxsoosaar iyo dhoofiye xirfadle ah isla markaana keena wax soo saarka koofiyadaha loo yaqaan 'Knit hat', iyo agabka madadaalada, Waxaan ka caawinaynaa macaamiisheenna inay u soo baxaan qaabka Beanie ee Shiinaha oo dhan.
Ganacsiga shirkaddu wuxuu ka bilaabmay 2006 lamaane Simon iyo Karen, waxay ka shaqeeyeen aaggan illaa 15 sano horeba.
Allsourcing waxay bixin kartaa xariiq buuxa oo ah moodada Beanie & Knit, Awoodda gaarka ah ee Allsourcing ee qaabeynta iyo tarjumaadda isbeddellada moodada iyo walxaha dhammaan xisaabaadka suuqyada iyo dhibcaha qiimaha ayaa noo oggolaanaya inaan horumarinno macaamiil kala duwan. Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 500 oo warshadood ah oo qayb ka ah. Tani waxay naga dhigi kartaa awood aan ku siino adeeg aad u fiican macaamiisha adduunka oo idil.
Cinwaanka: Wadada Bariga Huguang 89, Degmada Minhang, Shanghai, Shiinaha.
Xiga: Koofiyad Fedora
Koofiyad leh Burcad
Koofiyad leh Pom Pom
Koofiyad Midig leh Dalool Ponytail
Koofiyadaha Taranka Loogu Talagalay Ilmaha
Koofiyad Santa Hat
Koofiyad u tollan bilowga
Koofiyadaha Nfl Knit